Abakhiqizi Bomshini Wezinto Zokuthosa Kashokoledi | Yinrich
Uzakwethu Othembekile kuCandy, Choco & Bakery Industry
Imishini ye-confectionery iwumugqa wokuhlanganisa wokukhiqiza uswidi. U-Yinrich ungumkhiqizi wemishini ye-confectionery echwepheshile e-china, unomshini wokwenza ushokoledi onamathelayo, amathuluzi okuthengisa amaconfectionery athengiswayo. Imishini yethu ye-confectionery inomsebenzi omuhle kakhulu, ifakwe izinto zokupheka ze-confectionery, imishini yokucubungula i-confectionery, imishini yokupakisha ye-confectionery, njll.
Umugqa wokufaka we-jelly candy
Uchungechunge lwe-YINRICH’s GDQ ludizayinelwe ngokukhethekile ukwenza ama-jelly candies angesona isitashi, umthamo ukusuka ku-70kgs/h kufika ku-500kgs/h. Amaphaneli wokuthinta we-HMI ukuze asebenze kalula; Amaphampu okudosa omjovo ozenzakalelayo wemibala, ama-flavour nama-asidi; Imithende enemibala emibili , imibala emibili enezingqimba eziphindwe kabili, ukugcwaliswa okumaphakathi, kanye noswidi wejeli ongenalutho kungenziwa kulo mugqa. Ukufakwa kwemali okuqhutshwa yi-servo kulawulwa uhlelo lwe-PLC.
Umugqa we-marshmallow okhishiwe
Umshini wochungechunge lwe-EM ukuthi ubuningi bufakwa umoya nge-YINRICH's aerator, bese ihlukaniswa yaba yimifudlana eminingi. I-flavour nombala kuzojovwa ekusakazeni ngakunye. Ngemva kwalokho ungakwazi ukukhiqiza imikhiqizo ekhangayo ehlukahlukene nge-extruder ekhethekile ye-YINRICH, njengombala owodwa, imibala ehlanganisiwe, imibala emi-4 esontiwe, kanye nomkhiqizo okhishiwe ogcwaliswe maphakathi.
umugqa wokufaka we-lollipop
Uchungechunge lwe-YINRICH's GDL lwenzelwa ukwenza ama-lollipops afakiwe, umthamo ukusuka ku-120kgs/h kufika ku-500kgs/h. Amaphaneli wokuthinta we-HMI ukuze asebenze kalula; Amaphampu okudosa omjovo ozenzakalelayo wemibala, ama-flavour nama-asidi; Umthende wemibala emibili , imibala emibili enezendlalelo ezikabili, ukugcwaliswa okumaphakathi, kanye ne-lollipop ecacile kungenziwa kulo mugqa. Ukufakwa kwemali okuqhutshwa yi-servo kulawulwa uhlelo lwe-PLC. Isistimu yokufaka izinti ezizenzakalelayo iyatholakala.
Umshini weSandwich(Cookie Capper)
Le vidiyo ingumshini wamasemishi (ikhekhe lekhekhe) eyenziwe nguYinrich, okuwumugqa wokuhlanganisa wamakhukhi, umshini wamakhukhi wesangweji. UYinrich ungumbungazi oveleleumenzi wemishini ye-confectionery. Ngasikhathi sinye, futhi ihlinzeka ngomshini wamasemishi ahlukahlukene(i-cookie capper) kanye nemishini yamabhisikidi kakhilimu wesitshalo sokukhiqiza amakhukhi.Lo mshini wesangweji lochungechunge lwe-JXJ (i-cookie capper) ungaxhunywa kusihambisi sesitolo sokwenza amakhukhi, futhi ungaqondanisa ngokuzenzakalelayo, ubeke futhi uvale ngesivinini samarowu amakhukhi angu-300 (imigqa engu-150 yamasemishi) ngomzuzu. Izinhlobo ezihlukahlukene zamabhisikidi athambile futhi aqinile, amakhekhe angacutshungulwa ngomshini wesangweji (i-cookie capper). Ingaphakelwa futhi kusetshenziswa i-biscuit magazine feeder kanye nohlelo lokukhomba. Umshini wekhukhi lesangweji ube usuqondanisa, unqwabelene, uvumelanise imikhiqizo, ubeke inani elinembile lokugcwalisa, bese uvala phezulu phezu kwemikhiqizo. Amasemishi abe esehanjiswa ngokuzenzakalelayo emshinini wokugoqa, noma emshinini wokubethela ukuze kuqhutshekwe nenqubo. Lena yindlela umshini wesangweji (i-cookie capper) esebenza ngayo amabhisikidi.Ukucaciswa Okuyinhloko Kwezobuchwepheshe Komugqa Womhlangano We-Cookie:Amandla okukhiqiza: appro.14400~21600 amasemishi/minUkukhishwa kwezingcezu ezilinganiselwe: 30 pcs/minAmakhanda okufaka imali: 6 kuya ku-8Amakhanda okuvala amakhukhi: 6 kuya ku-8Amandla: 380V/12KWUbubanzi bebhande: 800mmUbukhulu: L:5800 xW: 1000 x H:1800mm
Kuze kube manje i-YINRICH isinikeze ngempumelelo umshini kashokoledi, okokusebenza kweconfectionery, izinto zokupakisha zeconfectionery, nezinye izinhlobo zemishini yeconfectionery kumakhasimende ethu emazweni nasezifundeni ezingaphezu kuka-60 emhlabeni. I-YINRICH ifake futhi yaqeda olayini bokukhiqiza abangaphezu kuka-200 kanye nempahla ye-confectionery, futhi yasungula umkhumbi wozakwethu wesikhathi eside namakhasimende ethu. Sibonga ngobuqotho ngezansi kozakwethu (ayikwazi ukuklelisa konke):
I-YINRICH® ingumkhiqizi kanye nomthumeli wezimpahla zeconfectionery ohamba phambili futhi ochwepheshe eChina ngokuhlinzeka ngemishini yokucubungula isinkwa esisezingeni eliphezulu, umshini wokwenza ushokoledi kanye nemishini yokucubungula ibhikawozi neyokufaka, enefektri e-Shanghai, eChina. Njengenkampani ehamba phambili kashokholethi nemishini ye-confectionery e-China.
I-YINRICH ikhiqiza futhi inikeze uhla oluphelele lwemishini yemboni kashokoledi kanye ne-confectionery, kusukela emshinini owodwa kuya ekuqedeni imigqa ye-turnkey, hhayi nje imishini ye-confectionery ethuthukisiwe yokuhweba enamanani okuncintisana, kodwa ukonga kanye nokusebenza kahle okuphezulu kwayo yonke indlela yesixazululo ye-confectionery. kanye nokukhiqizwa kukashokoledi.
Sihlinzeka ngokuklama, ukukhiqizwa, kanye nokuhlanganiswa kwemishini yeconfectionery emincane namaphakathi kanye nemigqa yokwenza ushokoledi ngokuhambisana nezidingo eziqondile zekhasimende.